ရှေးတုန်းက ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ် | PoemsCorner
ကိုယ်တကယ်မချစ်ပါဘဲနဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်တယောက်ကို ]ချစ်ပါတယ်]လို့
မွန်ရင်တွေခုန်နေမိတယ် … မောင်ဘာနျဲ့ကမစမငျန လုပ်မလဲဆိုပြီး တွေးလည်းတွေးနေမိခဲ့တယ်…
သိပ် romantic တွေဖြစ်တာပဲ..
ဘယ်သူ့ဆီကမှ လက်ါးဖြန့်စရာမလိုတော့တဲ့တစ်နေ့…. ပေါ့…
ဟောတော့ အရုပ်လေးတွေ များ ကြီးပဲတော့ ဈေးလျှော့ပြီးတော့ ရောင်းနေတာ..
———————– THE END ————————————————
eek .. getting on my nervers =|
ဟိုး…ရှေးရှေးတုန်းက သူမနှင့်ကျွန်တော် ရှိခဲ့ဖူးသည် (terry)
Leave comment2Comments & 4,289 views
aww,,d lo koe,,,
that’s why ,,,he didn’t contact at all.
that’s why,,,he didn’t worry.
that’s why,,he didn’t care.
that’s why,,always leave me alone.
that’s why,,,that’s why,,,change alot
By: ei lay at Dec 15, 2012